Mihambo ho mpitondra ny “fanovana ifotony”: volan’ny kaominina 130 tapitrisa Ar mahery nahodinkodin’i Pety | NewsMada
Par Taratra sur 10/08/2018
60 tapitrisa Ar, hofan-tanin’ny kaominina nampiasain’ny toby fivarotan-tsolika iray. 65 tapitrisa Ar, tapakila momba ny fitateram-bahoaka. 7 tapitrisa Ar, hofan-tsena sy haba… Santionany amin’ny fanodikodinam-bola nataon’i Pety, mihambo hitondra ny “fanovana ifotony”, fony izy ben’ny tanànan’i Fianarantsoa ireo.
Anisan’ny misongadina amin’izany ny fanodinkodinam-bola mitentina 60 tapitrisa Ar amin’ny hofan’ny tanin’ny kaominina an-dRenivohitr’i Fianarantsoa (CUF), araka ny datin’ny 16 jona 2008. Mivoitra amin’izany antontan-taratasy izany fa tsy nalefan’ny ben’ny Tanàna, Rakotoniaina Pety any amin’ny kitapom-bolan’ny kaominina na ny tahirim-bolam-panjakana, mitondra ny datin’ny 14 desambra 2006, araka ny taratasy avy amin’ny orinasa mpaninjara solika iray, nifanaraka amin’ny fanofana ny tany. Tsy vitan’izany fa tafiditra amin’ny fisandohana fahefana koa izao nataony fony izy ben’ny Tanàna izao.
Ankoatra izany, mbola tafiditra amin’ny raharaha fanodinkodinam-bola amin’ny tapakilan’ny fiara fitateram-bahoaka koa Rakotoniaina Pety ary niarahany amin’ny olona roa, mpiray tsikombakomba aminy eo anivon’ny birao mpanatanteraky ny kaominina izany. Mitentina hatrany amin’ny 65 tapitrisa Ar mahery io vola voahodinkodina io. Manampy izany ny hofan’ny tsena sy ny haba, mitentina hatrany amin’ny 7 tapitrisa Ar mahery. Tsy tafiditra any amin’ny kitapom-bolan’ny kaominina na koa ny tahirim-bolam-panjakana koa izany vola izany. Maherin’ny 130 t apritrisa Ar eo ho eo ireo rehetra ireo.
Fanamparam-pahefana sy antsojay…
Ampahany ihany ireo, ankoatra ireo fitarainan’ireo niharan’ny antsojay na koa fanamparam-pahefana nataony fony izy nitantana ny kaominin’i Fianarantsoa.
Midika izany fa manana antontan-taratasy tsy milamina ary efa maloto Rakotoniaina Pety, mitonona ho mpitondra ny fanovana ifotony . Tokony hijery sy handinika ny tenany aloha vao mitsara sy manaratsy ny hafa… Hadinon’ity PDS teo aloha ity fa anisan’ny namoaka azy tany am-ponja rehefa nogadrain’ny fitondrana Ravalomanana noho ny nataony ihany, ny filohan’ny Tetezamita Rajoelina.